Personalization - Lasa ny andron'ny Ry malala %% anarana voalohany %%. Ny sehatra mailaka sy fandefasan-kafatra maoderina dia manome automatique izay misy fizarana, atiny azo vinavina miorina amin'ny angona momba ny fitondran-tena sy ny demografika, ary ny fampidirana ny faharanitan-tsaina artifisialy hizaha toetra sy hanatsara ny hafatra mandeha ho azy. Raha mbola mampiasa marketing andiany iray sy be dia be ianao dia tsy hahita mpitarika sy varotra!
Marketing amin'ny alàlan'ny fampiharana hafatra - Satria mifandray foana isika, ny fandefasan-kafatra amin'ny hafatra mifandraika amin'ny fotoana mety dia mety hampisy fifandonana. Na rindranasa finday, fampandrenesana momba ny browser na fampandrenesana an-tranonkala… dia nandraisan'ny hafatra hafatra ho fampahalalam-baovao voalohany.
Fahaizana artifisialy - AI ary ny fianarana ny milina dia manampy ny mpivarotra hamita, hanaingo ary hanatsara ny fahaizan'ny mpanjifa tsy mbola nisy toy izany. Ireo mpanjifa sy orinasa dia miha reraka amin'ireo hafatra an'arivony an'arivony izay manosika azy ireo isan'andro. AI dia afaka manampy antsika handefa hafatra mahery vaika sy mahasarika kokoa rehefa misy akony lehibe izany.
Tags: aiai chatbotsfahaizana artifisialychatbotsfironana marketing amin'ny atinyfironana marketing amin'ny mailakaFacebookSary torohayfironana amin'ny automatisation marketingfironana marketingfironana findayfiantsenana zanatanyNy fanodinana fiteny voajanaharynlppersonalizationpersonalizationPinteresttoerana2mialohapersonalization mialohasegmentationsnapchatvarotra sosialyhaino aman-jery sosialyfironana amin'ny haino aman-jery sosialyTikTok
Tsy isalasalana, loharanom-pahalalana infografika mahavariana ny bilaoginao. Ary koa, ny lahatsoratra rehetra ao amin'ny bilaoginao dia voasoratra ara-pahaizana ary voaforona tsara.
Misaotra nizara infografika fahalalana!
20 Jan 2014 amin'ny 11:36 PM
Douglas Karr ! Tena mizara tena mampahalala. Voasarika tamin'ny famolavolana sy hevitra mahasoa ianao. Averina indray Misaotra betsaka
Taom-baovao dia miaraka aminy, azo atao lehibe ary tontolo an-tserasera izay mihamafy hatrany isan'andro. Miova tsy tapaka ny indostria, fa izay no mahaliana azy indrindra.
Eny, ny tena izy dia isan-taona aho manandrana mampifanaraka ny eritreritro momba izay hisarika ahy
ary manan-danja eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny ecommerce mandritra ny taona
Lahatsoratra tena be fampahalalana. Ity dia lahatsoratra mahafinaritra tokoa. Nanampy fampahalalana marobe tao amin'ny bilaoginao ianao. Misaotra nizara an'ity fampahalalana sarobidy ity. Tena manampy sy mampianatra koa izy io.
Salama Douglas nahafinaritra ireo torohevitra. Tohizo ny fandefasana.
3 Aogositra 2014 amin'ny 1:02 PM
Douglas Infographic lehibe sy mahasoa! Fantatro izao fa saika ny mpanapa-kevitra amin'ny orinasa manerantany dia aleony mampiasa ny media sosialy amin'ny asany rehetra. Misaotra ny fizarana!
7 Nov 2020 amin'ny 10:52 maraina
7 Nov 2020 amin'ny 10:53 maraina
mbola mandaitra ve ity atiny ity tamin'ny 2021?
25 Aogositra 2021 amin'ny 12:21 PM
Salama John, heveriko fa ny fironana tamin'ny 2014 dia tena be mpampiasa ankehitriny, atosiky ny olona miasa avy any an-trano sy miantsena amin'ny findainy.
Natosikao aho hanavao ity lahatsoratra ity ho an'ny 2021 miaraka amin'ny infographic lehibe sy ny antsipiriany avy amin'ny M2 On Hold.